Showing 81-100 of 114 items.
7390 पटक पढिएको
टेम्पो चालकको छोरी रिओ छम्छमी
धरान । धरान १७ का काजी खत्री (अधिकारी ) दैनिक टेम्पो चलाएर गुजारा गर्दै आइरहेका छन् । तर उनकी छोरी २० वर्षिया छोरी केविका खत्री ( अधिकारी ) भने नेपाल टेलिभिजनद्धारा बुधबार प्रसारण हुने राष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगिता &ldquo;रिओ छमछमी ३&rdquo;
धरानमा विवाहित ब्युटी प्याजेन्ट, ताजसहित एक लाख पुरस्कार
धरान /&nbsp;कसैको श्रीमती, कसैको आमा ,कसैको बुहारी भएर पनि आफुमा भएको क्षमतालाई देखाई मोडलको उपाधी प्राप्त गर्ने प्लेट र्फम धरानका विवाहित महिलाहरुले तयार गर्न थालेका छन् ।यही आउदो २६ गते धरान विवाहित महिलाले मोडेलको ताज सहित एक ल�
धरानमा विपुल क्षेत्रीको नेपाल टुर
धरानमा विपुली क्षेत्रीको नेपाल टुर धरान । धरानमा विपुल क्षेत्रीको नेपाल टुर २०१८ सांगीतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । यहि माघ २० गत्ते गिलिन्स् इनट्टेन्मेन्ट र पुर्वाञ्चल रक्सको आयोजनामा धरानको पव्लिक उच्च माध्यमिक विधालयको प्�
59510 पटक पढिएको
यलेदोङमा यलम्वर साँझले ततायो धरान
धरान । कुनै न कुनै वहानामा हरेक महिना म्युजिकल साझ भइरहने संगित प्रेमि धरानेहरुको शहर धरानमा आइतवारको साझ पनि अछुतो रहेन । धरान ८ स्थित यलम्वर वन अगाडि केहि ढिलो गरि भए पनि साझ सुरु भयो । सायद धरानमा वढेको अत्याधिक चिसोको कारणले
पोर्न स्टारको बलिउड इन्ट्री– पालो मिया मल्कोवाको
बलिउडमा इन्ट्री लिन लागेकी २६ वर्षीय यी पोर्न स्टार कुनै समय रेस्टुराँमा काम गर्थिन् । सनी लियोनीपछि मिया मल्कोवा दोस्री इंटरनेशनल पोर्न स्टार हुन् जसले बलिउड फिल्म निर्माताका साथ काम गर्दैछिन् ।........रामु उर्फ रामगोपाल वर्मा �
&lsquo;न देखेको भए हुन्थ्यो तिमीलाई&rsquo; बोलको गीतबाट दर्शक स्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल गायिका जुना प्रसाईंकोे &lsquo;ताराबाजी लै लै&rsquo; को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जुनाले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट उक्त गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की ! सुरक्षा बढाइयो
काठमाडौं । &lsquo;रेस&ndash;३&rsquo; नामक नयाँ फिल्मको छायांकनमा व्यस्त बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई एक समुहले ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ । उक्त समुहको धम्की पछि नयाँ फिल्मको छायांकन रोकिएको छ ।&nbsp; मुम्बईको गोरेगाउँस्थित फिल्म सिटी स्टूडिय�
पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भूमिका निभाउँदै विद्या बालन
काठमाडौं । &lsquo;तुम्हारी सुलु&rsquo; नामक फिल्ममा &lsquo;कमेडी रोल&rsquo; निभाएकी बलिउड अभिनेत्री विद्या बालन अव &lsquo;सीरियस&rsquo; भूमिकामा देखिने भएकी छन् । उनी भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको जीवनीमा आधारित &lsquo;बायोपिक&rsquo; मा अभिनय ग
किन भनियो यिनलाई नेपाली सन्नी लियोनी ? तस्बिरहरू
यी हुन् अदिति बुढाथोकी। नेपाली मोडल तथा उदीयमान अभिनेत्री अदितिको तुलना अहिले पूर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीसँग गरिँदैछ। भारतको वेबपत्रिका एबीपी न्यूजले अदितिका अर्धनग्न तस्बिरसहित &lsquo;मिलिए नेपालकी सन
5346 पटक पढिएको
कोही स्त्रीसँग नजिक हुँदै हुनुहुन्छ ? बिर्सेर पनि नर्गनुस यी १० भूल
पुरुषहरु महिलाहरुसँग बहुसम्बन्धमा समेत हुन्छन् । कतिपय पुरुष एकै पटक धेरै महिलासँग अन्तरंग सम्बन्धमा हुन्छन् भने कतिपय पुरुष एक महिलासँग टाढिएपछि तत्काल अर्कीसँग नजिकिन्छन् । खासगरी यौनिक प्रयोजनाका लागि महिला फेर्ने पुर�
इङघङ अर्थात “सन्देश”अव धरानमा ६ दिन
धरानका नाट्यकर्मी युवाहरुले रंगभुमिलाई व्यवसायिकता र आकर्षण वढाउनका लागि ६ दिन सम्म निरन्तर नाटक मन्चन गर्ने भएका छन् ।रंगभुमि एकेडेमी धरान ९ ले यही आउँदो माघ ९ गते देखि १६ गते सम्म इङघङ अर्थात &ldquo;सन्देश &rdquo; नाटक मन्चन गर्ने भक�
जाग्दै जगाउँदै धराने रंगमञ्च र रंगकर्मी
धरान/&nbsp;सुस्ताएको धरानको रंगमञ्च र नाट्यकर्मी पछिल्लो सयम जागरुक बन्न थालेका छन् । ५० वर्षको अन्तरालमा धरानको रंगक्षेत्र फेरि ब्यूँतिन थालेको छ । धरानका नाट्यकर्मीले रंगमञ्चलाई पुनः बयुँताउनका लागि संगठित भई नाट्य अभिनय ताल
3895 पटक पढिएको
चलचित्रमा इंटिमेट सिन्सको जसरी ट्रेण्ड चल्दै गयो, यस्ता सिनलाई चलचित्र राख्ने र स्टार्सले इंटिमेट सिन दिने क्रम पनि चलिरह्यो । कमै चलचित्र मात्र होलान् जसले यो ट्रेंडलाई नपछ्याएका हुन् । यस्तै इंटिमेट सिनको कुरा गर्दा हलिउडक
‘रोमान्स’ बाट बलिउड प्रवेश गर्दै प्रभास
काठमाडौं/ फिल्म &lsquo;बाहुबली २&rsquo; पछि प्रभासले धेरै दर्शकहरुलाई लोभ्याएका छन् । दर्शकहरुसँगै फिल्म निर्देशकहरु पनि उनीसँग काम गर्न उत्सुक छन् । यसैबीच फिल्म &lsquo;साहो&rsquo; पछि प्रभास रोमान्टिक फिल्मका साथ बलिउड प्रवेश गर्ने भएका छन�
विवादित सिनेमा ‘पद्मावती’ को प्रदर्शन मिति सार्वजनिक
काठमाडौं/ सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म &lsquo;पद्मावती&rsquo; प्रदशन मिति र र विवादका कारण चर्चामा छ । करनी सेनाको विरोध र विवादका बीच निर्माण पक्षले फिल्मको प्रदर्शन मिति सार्नु परेको थियो । तर अब फिल्म &lsquo;पद्मावती&rsquo; को प्रदर्शन मिति तय
1074 पटक पढिएको
धरान/&nbsp;सदाबहार गायक, मेघा स्टार र इन्टरनेसनल पप स्टारको उपमा पाएका राई इज किङ अर्थात राशेजपायल राई लामो समय पछि इटहरीमा देखा परे । सन्दर्भ थियो अग्रेजी नयाँ बर्षको । यसैको अवसर पारेर राजेश पायलले पूर्वका विभिन्न ठाउँमा सांगीत�
29962 पटक पढिएको